"Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny làlako ny teninao." Salamo 119:105
"(Hoy Jesosy:) Izaho no fahazavan’izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina." Jaona 8:12
“Fa ao aminao no misy loharanon’aina; ny fahazavanao no hahitanay fahazavana. Ampahareto amin’izay mahalala Anao ny famindramponao, ary ny fahamarinanao amin’ny mahitsy fo” (Salamo 36:9-10).
“Fa Andriamanitra, Izay nandidy hoe: Aoka ny mazava hahazava ao amin’ny maizina, no nampahazava ny fonay ho amin’ny fahazavan’ny fahalalana ny voninahitr’Andriamanitra eo amin’ny tavan’i Jesosy Kristy” (2 Korintiana 4:6).
“Fa ny lalan’ny marina dia toy ny fipoak’andro maraina, izay mihamazava mandra-pitataovovonan’ny andro” (Ohabolana 4:18).
“... Hiravoravo amin’ny Tsitoha ianao ka hanandratra ny tavanao amin’Andriamanitra. Raha mifona aminy ianao, dia hihaino anao Izy… Ary raha misy kasainao hatao, dia hotanterahiny aminao, ary hamirapiratra amin’ny lalanao ny mazava” (Joba 22:26-28).
“Tao ny tena Mazava Izay mahazava ny olona rehetra tonga amin’izao tontolo izao” (Jaona 1:9).
“Izay milaza fa ao amin’ny mazava izy, kanefa mankahala ny rahalahiny, dia mbola ao amin’ny maizina ihany. Izay tia ny rahalahiny no mitoetra ao amin’ny mazava, ka tsy misy fahatafintohinana ao aminy” (1 Jaona 2:9-10).
Tena mila fahazavana re izany fiainako;
Ny Teninao no hany manazava ahy.
Ary raha mivembena ny fandehako,
“Izaho no lalana”, hoy Ianao mantsy ahy.
Ny ahiahy sy ny nahoana, foana hatreo
Fantatro, Jesosy, fa Ianao no eo.